dir | georgedixonprimary
Bixinta Diyaarinta George Dixon
Baahiyaha Waxbarashada Gaarka ah iyo Naafada ayaa saameeya tirada sii kordhaysa ee carruurta ee bulshada. Istaraatijiyadaha kala duwan ee dugsiyadu iyo maamulayaasha waxbarashada ayaa sidoo kale sii kordhaya.
Boggan waxaad ka heli doontaa nuqul ka mid ah siyaasadeena SENDEDISKA, isku xirnaanta Birmingham Local Offer iyo Warbixinta Warbixinta faahfaahinta siyaabaha aan u taageerno ilmahaaga inta ay halkan joogaan.
Dhammaan Masuuliyiinta Maxkamadda waxaa looga baahan yahay in ay soo saaraan dalab maxalli ah, oo meel looga dhigo hal meel oo dhan macluumaadka ku saabsan bixinta ay filayaan in ay diyaar u yihiin carruurta iyo dadka da'da yar ee aaggooda leh baahi waxbarasho oo khaas ah. Xiriirinta Birmingham Local Offer waa saxantahay qoraalkan.
Bixinta Degmadda Birmingham